Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China mebiri Aluminium Chenyu
Ogwe osisi aluminom a na -ekpuchi anya anọwo na -achọsi ike n'ime afọ ole na ole gara aga, nke a bụ n'ihi eziokwu na ogwe ndị a na -ekpuchi ihu na -eweta nhọrọ dịgasị iche iche nwere atụmatụ na -agbanwe agbanwe. Otu uru kasịnụ nke ogwe a na -egwepịa bụ eziokwu na ha na -apụta n'ụdị agba dị iche iche. A na -ejikwa ogwe ndị a na -egwe ọka na kichin na ime ụlọ eme ihe.
1. Ogwe kọmpụta kọmpụta agbakwunyere mara nke ọma maka njirimara ha dị ka ezigbo ihe mkpuchi ọkụ, mkpuchi ụda, ike & ịdịte aka, ịdị larịị na ịdị larịị.
2. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere otu aluminom panel, ọ nwere oke na-agbanwe agbanwe, ọ naghị adịkwa mfe nkwarụ, ma nwee ike idobe arụmọrụ dị larịị ogologo oge na ọnọdụ eke na-enweghị ike mpụga.
3. Agba mara mma na imebe ụkpụrụ na -ezute nhazi nke ime mgbanwe maka mkpa gburugburu ebe obibi dị iche iche, na -emegharị ụdị ụkpụrụ ụlọ dị iche iche na gburugburu ebe obibi, ụcha a họọrọ dabara na gburugburu ebe obibi, na -enweta ịdị n'otu zuru oke na mmetụta nka n'ozuzu ya, na -enye ndị mmadụ ihe na -enwu enwu mara mma. obi uto.
4. Isi ihe aluminom na plastik dị na kọmpụta mejupụtara aluminom tụfuru nwere ike megharịa 100% ma nwee ibu gburugburu ebe obibi dị ala.
Ngwa ndị a na -ahụkarị nke aluminom gbachapụrụ agbachasị ga -abụ ojiji na mbadamba mgbidi & uko ụlọ maka ọwa mmiri, bọọdụ & akara, nke a na -eji arụpụta ụgbọ ala na ụgbọ mmiri, ime na mgbochi mgbidi.
Ebe ọ bụ na ihe mejupụtara aluminom mejupụtara ihe abụọ nwere ihe dị iche iche kpamkpam, ọ bụghị naanị na -ejigide njiri mara nke ihe akụrụngwa mbụ, kamakwa na -emeri ihe akụrụngwa nke mbụ ezughi oke, wee nweta ọtụtụ ihe onwunwe dị mma.
1) Ọrụ nhazi nke ogwe ihe mejupụtara ahịhịa bụ ụdị usoro nrụpụta nke na -eji akwụkwọ aja eme ihe ugboro ugboro iji kpochapụ wires n'elu panel nke ihe mejupụtara aluminom.
2) A na -ekekarị usoro ahụ ụzọ atọ: degrease, igwe nri aja na ịchacha mmiri. N'ime usoro ịse ihe waya nke ogwe ihe mejupụtara aluminom, mgbe nhazi anode gasịrị, teknụzụ akpụkpọ ahụ pụrụ iche ga -ewepụta epithelial oyi akwa, nke nwere ọla, n'elu kọlụm mejupụtara kọlụm, na -eme ka obere waya ọ bụla pụta nke ọma. gloss na matte ọla.
3) N'oge ugbu a, ọtụtụ ngwaahịa kọmpụta mejupụtara ngwa ahịa aluminom ejirila ihe osise waya n'elu aluminom iji mee ka ọ maa mma ma na -eguzogide ọgwụ.
Nke gara aga: Ogwe mejupụtara Aluminium dị elu
Osote: Ogwe ihe mejupụtara Aluminom nke anaghị agba ọkụ